गोविन्द केसीका सबै माग पूरा भैसकेका छन्, म माथि अन्याय भयो: दुर्गा प्रसाई	Postpati – News For All
पोष्टपाटी २०७६ कार्तिक २६,मंगलवार प्रकाशित पढ्न लाग्ने समय : ४ मिनेट
कार्तिक २६, काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्माले बढि शुल्क लिने निजी मेडिकल कलेजहरुले सरकारले तोकेको मितिभित्रै बढि शुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
निजी मेडिकल कलेजहरुले सरकारले निर्धारण गरेको भन्दा बढि शुल्क लिनु निन्दनीय भएको पनि उनको टिप्पणी छ । डा. केसीले राखेका मागहरुमध्ये एउटामात्रै माग पूरा गरेर नहुने भन्दै उनले सबै माग पूरा गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । सरकारले डा. केसीसँग अविलम्ब वार्ता